Asịrị – hoo!haa!!
ADA YUL EDOCHIE ACHATỌỌLA, TORUKWAA IHE E JI NWANYỊ EME- ỤMỤ NWOKE N’INSTAGRAM
N’ọba ozi mmekọrịta dị iche iche dịka Instagram na Twitter, ọtụtụ ụmụ nwoke ekwuola na ada Yul Edochie bụ Daniella Chidubem Yul-Edochie etoruwo ihe e ji nwanyị eme. Ndị ọzọ sikwa na ya bụ nwa agbọghọ bụrụ oroma, na ọ chaala, chatọọ achatọ maka nracha. Ihe butere okwu nile bụRead More →
Legọs – Kepu Kepu Asịrị hoo!haa!! na-anụ ugbua gosiri na otu nwa-afọ Anambara Steeti bi na Legọs so na ndị na-ewu ewu taa na Nollywood ebutela ọrịa koro. Onye a Chukwu maara aha ya ka anyị nụrụ na o si njem bata na nso a. Kaọdịtaa, ọ nọzị n’ogige nkewapụRead More →
Hmm, ndị asịrị. Unu dị egwu. Kedu akụkọ ndị asịrị na-akọ na o nwere otu Gọvanọ Ala-Igbo butere Ọrịa Koro? Bikonu, nkea ọ bụ eziokwu? Akụkọ karịzịrị. Ndị kọrọ akụkọ a achọghị ịkpọ mmadụ aha nke ha ji chọọ ikwu etu ha siri chọpụta nkea. Bikonu, ka anyị tinye ndịRead More →
KORO EJIDELA BUHARỊ – KEMI OLUNLOYO
Legọs – Kemi Olunleye, nwanyị na-ekwu okwu na-ada okwu na-akọwa site n’okwu ya na Twitter na ọrịa Koro ejidela Onyeisiala Muhammadu Buharị. Kemi kwuru na Buhari nọ “n’ezigbo ọrịa ma na-akwasikwa ụkwara ike” N’ozi ya na Twitter, agaba nwanyị a kwukwara na “e sila n’ụlọ ọgwụ bubata ígwè nkutume(ventilator)Read More →
GỌVANỌ BU NJE HIV?
Bikonu, a sịrị na o nwere onye Gọvanọ bu nje HIV akpagharị? Ya bụ Gọvanọ ahụ mara mma nwoke ka otu nwoke boro ebubo na Facebook na o ji iwe na-ekesa ya bụ nje. Nwoke ahụ kwukwara na nwunye ya laworo mmụọ so na ndị ketara ya bụ nje HIVRead More →
ZEERE ỤMỤ NWANYỊ YI JIGIDA N’UKWU
Jigida, ụmụ nwanyị na-eyi n’úkwù bidoro wuwe ọzọ. Kaọdịtaa, ọtụtụ ụmụ nwanyị, ọ kacha ụmụ agbọghọ na-eyizi Jigida n’úkwù. Mana mere ekike ji malite wuwekwa ọzọ? Gịnị bụ ebumnuche ndị a na-eyi Jigida? Ụfọdụ ji ya achọ mma. Ndị ọzọ sị na ha ji ya eme ka ha ghara ibuRead More →